Manampy serivisy fampandrenesana SMS sy mailaka ho an'ny mpandeha ny Air Niugini
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manampy serivisy fampandrenesana SMS sy mailaka ho an'ny mpandeha ny Air Niugini
Air-Niugini-manampy-SMS-sy-mailaka-fampandrenesana-serivisy-ho an'ny mpandeha-1200x480
Ny mpanjifa Air Niugini dia afaka mahazo fampandrenesana "Fampahatsiahivana" amin'ny alàlan'ny serivisy hafatra fohy (SMS) amin'ny alàlan'ny findainy ary koa mailaka.
Ity dia manaraka ny fampiharana ny fitaovana fandefasan-kafatra fampahalalana momba ny sidina izay nandeha tamin'ny Alarobia 21 Novambra 2018 lasa teo.
Ny fampandrenesana fampahatsiahivana momba ny dia dia mampatsiahy ny mpanjifa ny diany ho avy farafahakeliny 24 ora alohan'ny fiaingany.
Ny fampandrenesana hafa momba ny fanavaozana ny sidina, ny fanafoanana, ny fahatarana ary ny fanovana ny fandaharam-potoana dia hivoatra tsikelikely amin'ny herinandro ho avy.
Ny tale jeneralin'ny Air Niugini, serivisy ara-barotra Dominic Kaumu dia nilaza fa ny fitaovana fandefasana hafatra am-bava dia tena mety satria mamela ny seranam-piaramanidina hifandray mivantana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka sy SMS.
"Ny laharana finday rehetra sy adiresy mailaka nomen'ny mpanjifa nandritra ny famandrihana dia hahazo fampahatsiahivana momba ny dia, fanavaozana ny sidina ary fampahalalana hafa mifandraika amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra na mailaka," hoy izy.
“Nanomboka tamin'ny fampahatsiahivan'ny dia izahay izao. Raha vantany vao mamoaka ny hafatra amin'ny fanafoanana sy fanemorana ny sidina izahay, dia hiantoka ny fahafaha-manaon'ireo mpanjifantsika izay tsy mila mandeha lavitra mankany amin'ny seranam-piaramanidina vao hahalala fa nisy fiovana ny diany. ”
Air Niugini miaraka amin'ny Saber Travel Technology dia manohy manatsara ny fifandraisany amin'ny mpanjifa.